Ampinga: « Tsy voatery hoe te ho mpikabary ireo mianatra izany » | NewsMada
Nentanina ny fampianarana kabary mba tsy hahavery ity kolontsaina sy fomba mampiavaka antsika malagasy ity. Ankehitriny, miroborobo izany, raha ny fahamaroan’ny fikambanana mampiofana, izay miparitaka amin’ny faritra maro, indrindra eto an-dRenivohitra, no jerena. Azo lazaina ho tratra ny tanjona.
Niara-dalana tamin’izany, manaraka ny fivoaran’ny fiarahamonina sy ny asa aman-draharaha andavanandro ihany koa ny fianarana kabary. Misy karazany roa ireo mpianatra kabary, araka ny nambaran’ny filohan’ny fikambanana Ampinga, Manampisoatoavina Lalaina.
Eo aloha ireo maniry ny hahafehy ny fikabariana ka hampihatra izany mihitsy. Ao anatin’izany ireo te ho mpikabary matihanina, manao izany ho asa sy fivelomana, toy ireo mpikabary am-panambadiana.
Tsy vitsy koa anefa ireo mianatra kabary noho ny filàn’ny asany. Singanina amin’izany, ohatra, ny mpitarika na « leader », izay tokony hahay mifandray sy mifampiresaka tsara amin’ny olona tarihiny. Eo koa ny ray aman-dreny ao anatin’ny fianakaviana, izay manana anjara hatrany amin’ny fandraisam-pitenenana, rehefa misy ny fivoriana na tranga eo amin’ny fianakaviana.
Mbola tafiditra ao anatin’ity sokajy faharoa ity koa ny mpianatra, izay tsy maintsy manampy ny fahalalana eo am-pelatanany. Eo koa ireo te handalina ny tontolon’ny kabary ka hampiofana avy eo.
Manoloana izay filàna isan-karazany izay, nihamaro ny mpianatra, toy ny sahanin’ny Ampinga. Hanitatra ny toeram-piofanany eny Ambohimangakely sy Ambohitrimanjaka ny fikambanana, amin’ny taom-pianarana manaraka, izay hanomboka ny 8 sy 11 ary 12 novambra izao. Mitohy kosa ny eny Imerinafovoany, LTP Alarobia ary ny eny Ampefiloha.